एसईओ प्रतियोगी विश्लेषण को लागी Semalt बाट छिटो र प्रभावी कदम
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरु तपाइँले गर्नु पर्छ जब तपाइँ एक नयाँ ग्राहक को वेबसाइट वा तपाइँको आफ्नै वेबसाइट स्थिति शुरू गर्नुहुन्छ।
यसले हामीलाई मात्र प्रतियोगीहरु को शक्ति र कमजोरीहरु लाई अझ राम्ररी बुझ्न मा मद्दत गर्दैन, तर यो पनि हामी बाट बोझ लाई पा rein्ग्रा को आविष्कार गर्न को लागी लिन्छ। हामी प्रतिस्पर्धा भन्दा राम्रो गर्न को लागी स्क्र्याच बाट शुरू गर्न को लागी छैन।
आज हाम्रो गाइड मा, म एसईओ परियोजनाहरु को लागी एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धी विश्लेषण प्रक्रिया प्रस्तुत गर्दछु। यसको अतिरिक्त, तपाइँ पत्ता लगाउनुहुनेछ उपयुक्त उपकरण तपाईंले प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ।
ई-वाणिज्य मा प्रतिस्पर्धी विश्लेषण को4लाभ
तपाइँ कसरी तपाइँको अनलाइन स्टोर प्रतिस्पर्धा संग तुलना को एक समग्र मूल्यांकन प्राप्त हुनेछ। तपाइँ सीधै तपाइँको व्यक्तिगत क्षेत्रहरु लाई अन्य ई-स्टोरहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागी तुलना गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। म यो जोड्न चाहन्छु कि यो यस्तो व्यापक विश्लेषण गर्न लायक छ कम्तीमा एक पटक प्रत्येक छ महिनामा, किनकि स्थिति धेरै गतिशील परिवर्तन गर्न सक्छ।
तपाइँ जान्नुहुनेछ र जाँच गर्नुहुनेछ कि कुन क्षेत्रहरुमा तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा मा एक फायदा छ र जसमा तपाइँ स्पष्ट रूप बाट हारिरहनु भएको छ। छोटो मा, तपाइँ सिक्न को लागी तपाइँ घर मा सुधार गर्न को लागी क्रम मा अरु लाई हराउन को लागी, र अर्कोतिर, तपाइँ थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ कता बलियो हुनुहुन्छ।
ई-वाणिज्य उद्योग को विकास र परिवर्तन को सबैभन्दा ठूलो गतिशीलता को एक हालैका बर्षहरुमा भएको छ, यो याद गर्न लायक छ। तेसैले, यदि तपाइँ प्रतियोगितामा के गरीरहेको छ र/वा हामी भन्दा राम्रो हुन थाल्दै छ, मा नजर राख्नुहुन्न भने, यो मात्र एक लामो बाटो जान सक्छ।
के अप-टु-डेट एक वा दुई वर्ष मा मापदण्ड वा प्रवृत्ति को संदर्भ मा अब उपयोगी हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, विगत मा, अनलाइन स्टोरहरु मुख्य रूप मा डेस्कटप को लागी डिजाइन गरीएको थियो, यानी डेस्कटप कम्प्यूटर, किनकि बिक्री त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो।
वर्तमान मा, यदि तपाइँ मात्र मोबाइल को लागी तपाइँको स्टोर डिजाइन गर्न शुरू गरीरहनु भएको छैन, तथाकथित मोबाइल-पहिलो डिजाइन धेरै शुरुवात मा छ, तपाइँ भविष्य को लागी एक ठूलो समस्या हुनेछ, जहाँ अझै पनी धेरै स्टोरहरु लाई लागू गर्न को लागी अनलाइन स्टोरहरु पनि सिर्जना गर्दैनन्। आफ्नो ग्राहकहरु को लागी मोबाइल को लागी ग्राफिक mockups, डेस्कटप मा मात्र ध्यान केन्द्रित, जो एक ठूलो गल्ती हो!
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण किन महत्वपूर्ण छ?
हामी प्रतियोगीहरूको अनलाइन सफलताको आधारलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि उनीहरूको साइटको विश्लेषण गर्छौं। यसको अतिरिक्त, प्रतियोगी विश्लेषणले हामीलाई प्रतियोगी को लागी के महत्वपूर्ण छ र के बाहिर खडा छ मा जानकारी स gather्कलन गर्न अनुमति दिन्छ। किनभने, धेरै कम्पनीहरु कि लामो समय को लागी बजार मा भएको एक काफी स्पष्ट जैविक दृश्यता र लिंक प्रोफाइल छ। तेसैले तपाइँ चाँडै प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ के एक प्रतियोगी को लागी "शीर्ष" र के तपाइँको साइट को लागी महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
यस तरीकाले, हामी प्रतिस्पर्धी विश्लेषण लाई मात्र ती कीवर्डहरु लाई कम गर्दछौं जहाँ हामी वास्तविक मूल्य र बिक्री/रूपान्तरण बनाउन सक्छौं।
महत्वपूर्ण: यदि हामी एक नयाँ बनाईएको अनलाइन स्टोर, जो एक लोकप्रिय र प्रतिस्पर्धी क्षेत्र मा संचालित स्थिति शुरू, र एकै समयमा, त्यहाँ पर्याप्त उत्पादनहरु जसमा अवसर र प्रतिस्पर्धा को विषय मा खतरा को मूल्यांकन गर्न को लागी, यो एक गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। साक्षात्कार कि खाता मा भविष्य को लागी व्यापार योजनाहरु लाई लिन्छ।
एसईओ परिणाम प्राप्त गर्न को लागी औसत समय को रूप मा3महिना हो, हामी एसईओ गतिविधिहरु लाई समन्वय गर्न सक्छौं ताकि ग्राहक लाई उत्पादन लाइन पूरा गर्न को लागी समय छ, जबकि जैविक परिणाम मा एक उच्च स्थिति मा काम गर्दै।
प्रतियोगिता को कुन तत्वहरु लाई विशेष गरी विश्लेषण गर्नु पर्छ?
कुन तत्वहरु तपाइँ विश्लेषण को लागी छनौट गर्नुहुन्छ तपाइँको ब्यापार र लक्षित समूह को विशिष्टता मा निर्भर गर्दछ, किनकि केवल यस आधारमा तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँको ग्राहक को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
निस्सन्देह, यस्तो सूची एक नयाँ तत्वहरु संग पनी विस्तार गर्न सकिन्छ र गर्न सकिन्छ। तपाइँको विवेक र आवश्यकता मा सबै कुरा, किनकि के मैले तपाइँको लागी तयार गरेको छु मात्र एक योजना हो कि तपाइँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
जे होस्, म तपाईसँग साझा गर्न चाहान्छु कि तपाईले सधैं विश्लेषण गर्नुपर्छ। शुरू गर्न को लागी, म तत्वहरु संग शुरू गर्दछु कि एक अनलाइन स्टोर मा बिक्री को प्रभावकारिता को निर्धारण, यानी UX पृष्ठ।
तपाइँ तपाइँको अनलाइन स्टोर कसरी पठनीयता, स्पष्टता र प्रतिस्पर्धा को तुलना मा नेभिगेसन को सजीलो को सन्दर्भ मा स्ट्याक जान्नेछन्। यी आधारभूत तत्वहरु तपाइँ संग शुरू गर्न को लागी आवश्यक छ। किनकि अनलाइन स्टोर बेवकूफ प्रमाण हुन को लागी डिजाइन गरीनु पर्छ। यो एक सुन्दर शब्द नहुन सक्छ, तर त्यो अभ्यास को बिन्दु हो, ताकि जो कोहि त्यहाँ जान्छन् सजिलै संग यो पाउन र के गर्न को लागी थाहा हुन सक्छ। यो खुशी र त्यहाँ सार्न को आराम र अन्त मा एक खुशी को अन्त्य को लागी अनुमति दिनेछ, जो अन्तिम आदेश हो, वास्तविक बिक्री।
म तुरुन्तै जोड दिन्छु कि यो तत्व पनि चेकआउट संग सम्बद्ध हुनेछ, जहाँ तपाइँ छुट्टै तपाइँको अनलाइन स्टोर को उपस्थिति को तुलना शपिंग कार्ट बाट अन्तिम आदेश पुष्टिकरण को लागी प्रतियोगिता को तुलना मा। म यो छुट्टै उल्लेख गर्दछु किनकि यो टेम्प्लेट मा सूचीबद्ध तत्वहरु मध्ये एक हो।
मूल्य स्तरले तपाइँलाई तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु संग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ अनुमान गर्न अनुमति दिनेछ। यदि तपाइँ विशेष गरी मानकीकृत उत्पादनहरु बेच्नुहुन्छ, तपाइँ यस क्षेत्र बाट बच्न सक्नुहुन्न, यो अग्रिममा बताईन्छ ताकि यो बाहिर नलाग्ने कि तपाइँ तपाइँको अनलाइन पसल, जुन धेरै अन्य अनलाइन पसलहरु को समान उत्पादनहरु हुनेछ कि शुरू गर्ने योजना बनाइरहनुभएको छैन। तपाइँ विश्लेषण गर्नुहुन्न।
तपाइँको खरीद को शर्तहरु को जाँच गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्यहरु लाई प्रस्ताव गरीएको छ र विश्लेषण गर्नुहोस् कि यो तपाइँको लागी व्यापार को अर्थ बनाउँछ, जहाँ मार्जिन १०%को स्तर मा हुनेछ। म खुलेर भन्छु, यो मार्जिन स्तर संग, सोच्नुहोस् कि यो बिल्कुल गर्न लायक छ।
यस्तै स्थिति एक अनलाइन स्टोर को लागी हुनेछ जुन धेरै बर्ष देखि संचालित छ, जसले मूल्य स्तर को हिसाबले प्रतियोगिता अवलोकन गर्न बन्द गरीएको छ र पछि आश्चर्यचकित छ कि चयनित उत्पादन दायरा बेचेको छैन जब यो धेरै दर्जन भन्दा महँगो छ। बाँकी भन्दा प्रतिशत।
निस्सन्देह, त्यहाँ पसलहरु छन् कि एक उचित मूल्य धारणा बनाएको छ, यानी धारणा कि उनीहरु सस्तो छन्, र व्यवहार मा, यो बाहिर जान्छ कि उनीहरु सस्तो थिए, तर ३-४ बर्ष पहिले। अब यो हासिल गर्न धेरै गाह्रो छ।
कुल किनमेल अनुभव
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व प्रत्येक अनलाइन स्टोर को लागी विश्लेषण गर्न को लागी, किनकि यो एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ई-वाणिज्य संकेतक, जो CLV हो, यानी ग्राहक लाइफटाइम मान, जो समय संगै ग्राहक को जीवन को मूल्य हो निर्धारण गर्दछ।
यदि हामी चाहान्छौं कि हाम्रा ग्राहकहरु नियमित रूप बाट हामीकहाँ फिर्ता आउन्, हामी उनीहरुलाई पूर्ण उत्तम सम्भव शपिंग अनुभव प्रदान गर्नै पर्छ कि हामी बर्दाश्त गर्न सक्छौं; स्टोर मा खरिद प्रक्रिया बाट नै ग्राहक संग उचित संचार को लागी आदेश दिए पछि, अन्तिम ग्राहक को लागी ढुवानी को अन्तिम वितरण को माध्यम बाट (प्याकेज को उपस्थिति, यो प्राप्त गरे पछि भावनाहरु, कूरियर कसरी व्यवहार गर्दछन्, को हो हाम्रो समग्र रसिद को लागी ठूलो महत्व छ, तर न केवल त्यो को लागी। हामी पहिले नै प्रत्यक्ष प्रभाव छ)।
यसको अतिरिक्त, मँ सुझाव दिन्छु कि तपाइँ परीक्षण के यो प्रतियोगिता संगै देखिन्छ, साथ साथै तपाइँ संग। अर्डर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया, साथै यससँग सम्बन्धित ग्राहक सेवा के हो? यदि हामी प्रतियोगीहरु 'हटलाइन कल, आफ्नो ई-पसल संग यो गर्न को लागी कसरी यो वास्तव मा तपाइँको ग्राहकहरु को समस्याहरु लाई हल गर्दछ। के उनीहरु साँच्चै सल्लाह र मद्दत गर्छन्, के उनीहरु सक्षम र दयालु छन्? याद गर्नुहोस् कि शैतान विवरणमा छ र धेरै यो तत्वमा निर्भर गर्दछ!
एक तत्व हो कि, मेरो अवलोकन बाट, धेरै धेरै ई-वाणिज्य साइट मालिकहरु द्वारा कम गरीएको छ। यो एक ठूलो गल्ती हो किनकि तपाइँको अनलाइन स्टोर को पृष्ठ लोड गति सीधा एक उच्च रूपान्तरण मा अनुवाद।
तपाइँ संसार मा सबै भन्दा राम्रो UX, एक महान बिक्री र मार्केटि strategy रणनीति हुन सक्छ, तर यदि तपाइँको अनलाइन स्टोर २० सेकेन्ड को लागी लोड हुन्छ, म तपाइँको लागी राम्रो बोड छैन! यो याद गर्न लायक छ।
साथै, यो याद गर्न लायक छ कि पृष्ठ गति Google को एल्गोरिदम को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रैंकिंग कारकहरु मध्ये एक हो। यो छिटो गुगल खोज इन्जिन मा तपाइँको अनलाइन स्टोर को जैविक दृश्यता लाई प्रभावित गर्दछ। छोटो मा, राम्रो UX संग छिटो अनलाइन स्टोरहरु राम्रो हुनेछ यदि सामग्री को गुणवत्ता र विशिष्टता तुलनात्मक छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा गर्न तपाईंले कुन उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ?
तपाइँ भर्खरै बिभिन्न कारकहरु को एक खाता मा एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण मा सफल हुन को लागी खोजिएको छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यो विश्लेषण एक योग्य एसईओ उपकरण को हस्तक्षेप बिना सफल हुनेछैन। वास्तव मा, एक उपकरण तपाइँ धेरै छिटो जान को लागी अनुमति दिन्छ, र प्रतियोगी को साइट मा लुकेको जानकारी छ।
त्यसोभए, कुन उपकरण सबैभन्दा राम्रो यो कार्य गर्न को लागी उपयुक्त छ? यदि तपाइँ एक एसईओ एजेन्सी वा एक स्वतन्त्र एसईओ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तपाइँ शायद प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गर्न को लागी केहि एसईओ उपकरण जान्नुहुन्छ। तर, तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि हामी यस्तो युगमा छौं जहाँ प्रतिस्पर्धा विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै कडा हुँदै गइरहेको छ। तेसैले, तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागी उपकरण को नवीनतम पुस्ता को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक छ।
Semalt मा विज्ञहरूले यो सोचेका छन्। राम्रो समाचार यो हो कि उनीहरु लाई एक एसईओ उपकरण भनिन्छ विकसित गरीएको छ समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड (DSD) एक पूर्ण एसईओ अडिट र वेब एनालिटिक्स प्लेटफर्म हो कि शून्य लागत मा तपाइँको डोमेन मा चलाउन सकिन्छ। यसबाहेक, यो तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड अन्तर्गत उन्नत एनालिटिक्स सेवाहरु प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
यहाँ समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड को केहि सुविधाहरु छन्।
Google SERP विश्लेषण
यो एक उपकरण यो उपकरण हो कि तपाइँ Google SERP मा प्रत्येक वेबसाइट को स्थिति जान्न को लागी अनुमति दिन्छ मा शामिल छ। थप रूपमा, यसले शीर्ष पृष्ठहरु र कीवर्डहरु प्रकट गर्दछ जसको लागी उनीहरु श्रेणीबद्ध छन्। यो प्रतियोगी विश्लेषण सुविधाले तपाइँलाई खोजी गरिएको स्थानमा मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू प्रकट गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरीकाले तपाइँ तपाइँको प्रतियोगीहरु को यातायात उत्पन्न कीवर्ड जान्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरुको पदोन्नति रणनीति को एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्राविधिक एसईओ लेखा परीक्षा
यो सुविधा तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को एक पूर्ण विश्लेषण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। प्राविधिक अडिटि from बाट गति परीक्षण र साहित्यिक चोरी जाँच सबै कुरा अब एक छत मुनि छन्।
रिपोर्ट केन्द्र सुविधा हाम्रो समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड को दृढतापूर्वक नवीनता मा केन्द्रित छ कि को एक अन्य विशेष सुविधा हो। यो व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक ग्राहक को लागी तपाइँको रिपोर्ट को वितरण को लागी कार्यक्रम बनाउन को लागी डिजाइन गरीएको हो। तपाइँको ब्यापार को लागी यो उपकरण को लाभहरु अटुट छन् किनकि यसले तपाइँको ग्राहकहरु लाई व्यापक एसईओ जानकारी प्रदान गर्दछ, तपाइँको लोगो र ब्रान्डि with संग पूरा।
तपाइँ भर्खर Semalt समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड को3सुविधाहरु देख्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै अन्य सुविधाहरु यस उपकरण मा शामिल गरीएको छ र म तपाइँलाई उनीहरु आफैंलाई खोज्न को लागी आमन्त्रित गर्नुहोस् Semalt द्वारा प्रदान गरिएको १४ दिन को नि: शुल्क परीक्षण को लागी धन्यवाद। कृपया ध्यान दिनुहोस्: यो परीक्षण अवधि को दौरान, तपाइँ मानक प्याकेज मा शामिल सबै सुविधाहरु को लागी पहुँच हुनेछ। यो तपाइँ एक वित्तीय प्रतिबद्धता गर्नु अघि यो उपकरण को दक्षता र गति को सराहना गर्न को लागी अनुमति दिनेछ।
त्यसोभए अब धेरै पर्खनुहोस्! आफ्नो नि: शुल्क सुरु गर्नुहोस् परीक्षण अवधि आज।
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण मा निष्कर्ष
तपाइँको कम्पनी को लागी एक प्रभावी मार्केटि and र बिक्री रणनीति को विकास गर्न को लागी, तपाइँ तपाइँको प्रतियोगीहरु को एक नियमित मूल्यांकन र पक्कै तपाइँको अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरु को आवश्यकता छ। यो एक मात्र तरिका हो कि तपाइँ तपाइँको प्रतिद्वन्द्वीहरु को बिरूद्ध बजार मा दृढता संग स्थिति को लागी र प्रतिस्पर्धी लाभहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी। तपाइँ कम्तीमा एक वर्ष एक पटक एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण आचरण गर्नुपर्छ। तपाइँको पहिलो विश्लेषण को लागी प्रयास तपाइँको अनुवर्ती विश्लेषण को लागी भन्दा धेरै उच्च हुनेछ। याद गर्नुहोस् कि तपाइँको प्रतिस्पर्धी विश्लेषण को लागी आवश्यक प्रयास को सफलता वा तपाइँको व्यापार को विफलता मा एक निर्णायक प्रभाव छ।